सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूभित्र को ठूलो भनेर टलस शुरु
काठमाडौँ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूभित्रै कतिसम्म प्रतिस्पर्धा र इगो हुन्छ भन्ने कुरा संसद सचिवालयमा खिएको छ । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूभित्रै को ठूलो भनेर टलस शुरु भएको छ । एमाले पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिना र सचिव राजेन्द्र फुयाँल तथा पूर्व माओवादी नेता एवम् प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सचिव गोपालनाथ योगीबीच पछिल्लो समय विवाद देखिएको छ ।
उनीहरूबीच क्षेत्राधिकार र अस्तित्वलाई लिएर ठूलो विवाद छ । कानूनअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै अगाडि र ठूलो मानिन्छन् । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलको व्यक्तिगत इगोका कारण संसद सचिवालयभित्र समस्या देखिएको एक कर्मचारीले बताए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले १६ गतेको संसद अधिवेशन एकै ठाउँमा बस्न नदिने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख १६ गते अपरान्ह ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अलग–अलग बोलाइएको छ ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुबै सदनको बैठक संयुक्त रुपमा बोलाइनु पर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । सभामुख महरा भन्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँल हाबी भइरहेका छन् । माओवादी पृष्ठभूमि भएका महराले केही गर्न नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको छ ।
पूर्वसभामुख एवम् नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको दवावमा महरा पनि केही कठोर कदम चल्ने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सचिवको दवावमा ठूलो घोटाला भएको आरोप पनि लागेको छ । कार्यकक्ष बनाउने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत पत्र पठाएर छानविनको दायरामा राखेको छ ।
मर्मत खर्चको पैसा अध्यक्ष र सचिवले अर्थमन्त्रालयसँग ताकेता गरेर माग गरिरहेका छन् ।राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले यसअघि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा पनि सिधै
हस्तक्षेप गरेका थिए । उनीहरूको आदेश पालना नगर्ने कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा फारम नभर्दा पनि जबरजस्ती समायोजनमा पारिएको छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयाँलले कानून विपरितका कार्य र हर्कत गर्दा समेत महराले कुनै पनि कदम चाल्न नसक्नुमा कमजोरीका रुपमा कर्मचारीहरूले लिएका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिना र फुयाँलले मनपरी गरेर हैरान बनाएको उजुरी सभामुख महरासम्म पुगेको छ । महरा पनि दोधारमा परेका छन् । आज प्रकाशित युनाइटेड पोष्टबाट ।
नक्कली बोइफ्रेन्ड !
एजेन्सी । जापानको भिडियो गेम कम्पनी ‘लेवल–५’ ले ओटोम युशाको साथ मिलेर एक नक्कली बोइफ्रेन्ड बनाएको छ । महिलाहरु यसलाई अंगालो हालेर आफ्नो तनाव कम गर्न सक्छन् ।
यसरी गर्न सकिन्छ आँखाको सुरक्षा
काठमाडौं । शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो आँखा । यसै आँखाको मद्धतले हामी संसार देख्न पाएका छौं । यस अंगको एकदमै सुरक्षा गर्नुपर्छ । यसै आँखाले गर्दा नै हामी प्रकृतिको सुन्दर दृश्य देख्न पाएका छौं ।
पिकनिक जानेक्रममा बस दुर्घटना, १३ घाइते
सुरुङ्गा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बिर्तामोड सडकखण्डको रेखापुल नजीकै आज बिहान भएको बस दुर्घटनामा परी १३ जना घाइते भएका छन् । झापाको दमकबाट वनभोजका लागि इलामको कन्याम हिँडेको ना६ख ६१८१ नंको बस दुर
काठमाडौं । शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो आँखा । यसै आँखाको मद्धतले हामी संसार देख्न पाएका छौं । यस अंगको एकदमै सुरक्षा गर्नुपर्छ । यसै आँखाले गर्दा नै हामी प्रकृतिको सुन्दर दृश्य देख्न पाएका छौं । यसै महत्वपुर्ण अंगको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आज जानकारी लिऔं ।
यस्तो रहेको छ शनिबारको तपाईको भाग्य–मंसिर २१ गते
ग्यास्ट्रिकबाट बच्न प्याज !
खुट्टाको आकार र औंलाले बताउँछ तपाईंबारे रोचक पक्षहरू
पचास वर्षयता एउटा पनि बच्चा नजन्मिएकाे एक गाउँ
के १५ हजार वर्षअघि पनि कन्डमको प्रयोग हुन्थ्यो ?